I-OPPO A9: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni | I-Androidsis
I-OPPO isishiya neefowuni ezininzi kwezi veki. Umenzi waseTshayina sele ebhengezile ukumiliselwa kwoluhlu lwayo lweReno eYurophu, ejolise ekuphuculeni ubukho bayo kwilizwekazi. Ukongeza, kule veki umnxeba omtsha wefowuni entsha uziswe ngokusemthethweni, i-A1K. Ngoku lithuba lika Uluhlu oluphakathi oluphakathi lwenxalenye yalo, i-OPPO A9.
Le OPPO A9 iboniswa njengenye entsha iiflegi zebanga eliphakathi lophawu lwesiTshayina. Ifowuni eshiya ukuziva okuhle kwinkcazo yayo kwaye enokufumana indawo kweli candelo lentengiso. Ke kuya kufuneka siyigcine.
Njengoko sibona okuninzi namhlanje, mhlawumbi okuninzi kakhulu, ifowuni isebenzisa ifayile ye isikrini kunye notshi ngohlobo lwethontsi lamanzi. Ukongeza, njengoko kuqhelekile kuluhlu oluphakathi, iikhamera ezininzi zisilindile ngasemva. Iyahambelana ke noko namhlanje.
1 Ukucaciswa kwe-OPPO A9
Ukucaciswa kwe-OPPO A9
Kwinqanaba lobugcisa, siyayibona loo nto isishiya sinenkcazo elungileyo Uluhlu lwayo. Ngelixa kunokwenzeka ukuba kukho abasebenzisi abangonwabanga kwaphela yiprosesa esetyenzisiweyo kule-OPPO A9. Kodwa ngokubanzi yifowuni esishiya sineemvakalelo ezilungileyo. Iyahambelana noko kulindeleke kuluhlu oluphakathi kwi-Android namhlanje. Oku kukucaciswa kwayo:
Isikrini: 6,53 intshi ngesisombululo se-2340 x 1080 pixels.
Ukugcina ngaphakathi: I-128 GB (Iyandiswa ngekhadi le-MicroSD)
Cámara traseraIsisombululo: 16 MP + 2 MP kunye nokuvula f / 1.8 kunye neFlash Flash
Ikhamera yangaphambiliIsisombululo: 16 MP nge-f / 2.0
ConectividadI-WiFi, iGPS, iBluetooth, i-USB-C, i-GLONASS,
abanyeIsivamisi seFingerprint kwindawo engasemva kunye nokuchongwa kobuso.
Ibhetri: 4020 mAh ngentlawulo ekhawulezayo
Inkqubo yokusebenzaI-Android 9 Pie enombala we-OS 6.
Njengesiqhelo kuluhlu oluphakathi kwi-Android, sifumana isikrini esikhulu. Kule meko, kusetyenziswa isikrini esikwi-intshi eyi-6,53. Ukukhetha iprosesa yinto enokungathandwa ngumntu wonke. Kuba uphawu lwaseTshayina lusebenzisa uHelio P70. Ngelixa yenye yezona zinto zibalaseleyo zeMediaTek, abasebenzisi abaninzi banokungayithandi ngokupheleleyo. Ibhetri yenye yamandla ayo, ngomthamo we-4.020 mAh. Ngokuqinisekileyo ivumela ukuzimela okuhle kubasebenzisi.
Ngasemva kwale OPPO A9 silindwe kabini ngasemva ikhamera, ethembisa ngeefoto ezilungileyo. Ngaphambili sinoluvo olunye, olusivumela ukuba sisebenzise ukuvula ubuso. Yintoni egqithisile, Kule meko sinenzwa yeminwe, ebekwe ngasemva kwisixhobo. I-Android Pie sele isetyenzisiwe ngokwendalo kwinkqubo yokusebenza, kunye nocwangco lokwahlulahlula uphawu lweshayina.
Le OPPO A9 sele inikwe ngokusemthethweni e China. Intengiso apho sele ibekwe ngokusemthethweni kwintengiso, njengoko sele iqinisekisiwe. Okwangoku, akukho datha ibonelelweyo ngokusungulwa okunokwenzeka kwefowuni. Nangona ngoku i-OPPO igxile kwimizamo emininzi eYurophu, inokugqibela ngokuza. Kodwa kuya kufuneka silinde ezinye iindaba ezivela kuwe malunga noku.
Sifumana ingxelo enye yefowuni ngokwe-RAM kunye nokugcinwa kwayo. Ngokuphathelele imibala, sinezinto ezintathu onokukhetha kuzo. Umbala oluhlaza usetyenziswa kwimodeli enye, omnye umhlophe kwaye ukubheja kwesithathu kwiithowuni zegradient, ngeli xesha liluhlaza okwesibhakabhaka nokumfusa. Ke wonke umntu unokukhetha eyona ayithandayo. Ixabiso lefowuni e-China yi-1799 yuan, emalunga nee-240 zeerandi zokutshintsha.
Ukuba iphehlelelwe eYurophu, Ixabiso lale-OPPO A9 mhlawumbi liya kubiza kakhulu. Kodwa ngokuqinisekileyo kungekudala siza kuba nedatha eninzi malunga noku. Ke siya kuphulaphula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-OPPO A9: Uluhlu olutsha lwaphakathi lwegama lesiTshayina